Mitentim-bidy 360 miliara Ar : mafia mpanao trafika andramena roalahy nidoboka am-ponja | NewsMada
Mitentim-bidy 360 miliara Ar : mafia mpanao trafika andramena roalahy nidoboka am-ponja
Telo izy ireo no natolotra ny mpitsara mpanao famotorana teny anivon’ny Chaîne pénale anti-corruption, 67 ha, ny talata teo. Naiditra am-ponja vonjimaika (MD) ny roa taorian’izany. Fanondranana an-tsokosoko andramena 26 kaontenera, mitentim-bidy 360 miliara Ar sy heloka hafa no anenjehana ireto voalaza fa mafia mpanao trafika ireto.
Andrasan’ny rehetra, toy ny fahafantarana ny voarohirohy amin’ny lafiny hafa (toa an-dRtoa Razanamamonjy Claudine) ny anaran’ireo trondro vaventy mpanao trafika andramena eto Madagasikara. Niakatra fampanoavana teny amin’ny Chaîne pénale 67 ha, ny talata 4 avrily teo ny olona telo, voarohirohy amin’ny fanondranana andramena milanja 4.500 t. Tombanana hatrany amin’ny 360 miliara Ar ireo andramena ireo, raha kajiana 25 dolara ny vidin’ny iray kilao (raha 1 dolara=3.200 Ar). Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo, ny taona 2015, misy fikasana hanondrana andramena an-tsokosoko ho any Azia ataon’ny tambajotra mafia. Tao anaty kaontenera 26 izy ireo, saika naondrana tany Hong Kong ary nandalo tatsy Zanzibar Tanzania. Hanenjehana azy ireo ny fanondranana tsy ara-dalàna andramena, fanaovana hosoka sy taratasy hosoka amin’ny taratasim-barotra ary fanaovana kolikoly. Taorian’ny fakana am-bavany azy telo, naiditra am-ponja vonjimaika (MD) ny roa lahy.
Tsiahivina fa mijanona ho tsiambaratelo tanteraka ny anaran’ireo mpanome loharanom-baovao ny Bianco, araka ny lalàna 2016-020.
Tsy miasa tsy misy vokatra ny fitsarana andramena
Maromaro ny raharaha mafana sy goavana teny amin’ny Bianco, saingy very an-javony rehefa mandalo any amin’ny rafi-pitsarana Chaîne pénale. Anisan’izany ny raharaha maha voarohirohy ireo mpitantana Jirama teo aloha. Ny fitrandrahana volamena any Betsiaka Ambilobe, ny raharaha andramena nitazonana vonjimaika mpandraharaha iray B., ary navotsotra taty aoriana, ary tsy nisy tohiny intsony mandraka ankehitriny.
Hatreto aloha, tsy nisy ny tena fanasaziana ny meloka rehefa niakatra teny amin’ny rafi-pitsarana Chaîne pénale. Tsy mbola tafapetraka ny rafitra vaovao Tendro miady amin’ny kolikoly (Pôle anti-corruption), zary anarana sy nankalazaina an-gazety sy kabariana etsy sy eroa fotsiny ny fitsarana manokana miady amin’ny trafika andramena, saingy tsy miasa, tsy misy vokatra vita tao anatin’ny herintaona sy efa-bolana nandaniana azy teny amin’ny antenimiera roa. Dikany, tsy mbola hita taratra sy azo tsapain-tanana ny vokatra amin’ny fandringanana ny harem-pirenena sy ny trafika iraisam-pirenena.